ကိုဗစ်နိုင်တင်း မျိုးကွဲများကို သိပ္ပံပညာရှင်များ ‌ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပုံ – စွယ်စုံသုတ
ကိုဗစ်နိုင်တင်း မျိုးကွဲများကို သိပ္ပံပညာရှင်များ ‌ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပုံ
ဗီဇပြောင်းပိုးသစ်ကို လက်ဦးမှုရယူနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတဲ့ထဲမှာ ယူကေက ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေ ပါဝင်ပါတယ်
Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ Delta မျိုးကွဲတစ်မျိုးဟာ ကမ္ဘာအနှံ့ ပျံ့နှံ့နေပါပြီ။
ဒီလို ဗီဇပြောင်း မျိုးကွဲအသစ်တွေနဲ့ အမီလိုက်နိုင်ဖို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက အမြဲကြိုးစားနေကြတာပါ။
ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကို လက်ဦးမှုရဖို့အတွက် မျိုးကွဲတွေကို ရှာဖွေမှုအဆင့်ဆင့်ကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ အခု အတော်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ Delta မျိုးကွဲလိုမျိုး Covid-19 ရဲ့ မျိုးကွဲတွေကို လိုက်ရှာနေတဲ့ အစိုးရသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ “ဗိုင်းရပ်စ် စုံထောက်” ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီဗိုင်းရပ်မျိုးကွဲတွေကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဘယ်လိုပုံနဲ့ ရှာဖွေ စောင့်ကြည့်ကြပါသလဲ။
ဗိုင်းရပ်စ်တွေဆိုတာက မိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့ ကြည့်မှ မြင်ရတဲ့ အဏုဇီဝအကောင်တွေဖြစ်ပြီးတော့ သူတို့ဟာ အိမ်ရှင်သတ္တဝါတစ်ကောင်မရှိဘဲ အပြင်မှာ ကြာကြာမနေနိုင်ကြပါဘူး။ သူတို့ဟာ သက်ရှိတွေဆိုပေမယ့် ဘက်တီးရီးယားတွေထက် အရွယ်အစားသေးငယ်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် ပိုလီယိုဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ဆားမှုန်တစ်မှုန်ထက် အဆ ၁၀,၀၀၀ ပိုသေးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့မှာ သူတို့ကိုယ်ပိုင် DNA (ဒီအောက်စီရိုင်ဘို နျူးကလိရစ် အက်စစ်) တွေ၊ RNA (ရိုင်ဘိုနျူးကလိရစ် အက်စစ်) တွေ ရှိနေကြပါတယ်။ ဒီ DNA တွေ RNA တွေဟာ သက်ရှိအားလုံးရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒီလိုရှိနေတဲ့အတွက် ဗိုင်းရပ်စ်တွေဟာ ပုံစံအသစ်တွေကို ပြောင်းနိုင်ကြပါတယ်။ SARS-CoV-2 ဟာ ဆိုရင် Covid-19 ဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပြီးတော့ အခုအချိန်အထိ သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ သူ့ရဲ့ မျိုးကွဲ ၄ ခုကို ရှာတွေ့ထားပြီးပါပြီ။ ဒီမျိုးကွဲတွေဟာ ပိုမို ပျံ့နှံ့လွယ်၊ ပွားများလွယ်တဲ့အပြင် ကာကွယ်ဆေးဒဏ်ကိုလည်း ပိုခံနိုင်တဲ့အတွက် ဒီမျိုးကွဲတွေကို စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Alpha မျိုးကွဲကို ဘယ်လိုရှာတွေ့ခဲ့သလဲ?
Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ် ရဲ့ UK မျိုးကွဲ သို့မဟုတ် Alpha မျိုးကွဲကို အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Kent မြို့မှာ ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလောက်က စတွေ့ခဲ့တာပါ။ Dr. Meera Chand ဟာ ဆိုရင် ဒီကိစ္စကို ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ ကူးစက်ရောဂါပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
“ကျွန်မတို့ ဒီမျိုးကွဲကို တွေ့တွေ့ချင်းပဲ ဒါဟာ အရမ်းကို စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာ သိခဲ့ပါတယ်” လို့ သူက ပြောကြောင်း Public Health England ဝက်ဆိုက်မှာ ရေးထားပါတယ်။
“ပုံမှန်ဆိုရင် နမူနာတွေကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ နည်းနည်းစီကွဲတဲ့ မျိုးကွဲများစွာ ပါဝင်တဲ့ အစုငယ်လေးတွေကို တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Kent မှာတုန်းကတော့ ကျွန်မတို့ကြည့်နေတဲ့ နမူနာ ၅၀ % ကျော်ဟာ တော်တော်ကြီးကို တူနေပြီးတော့ အစုအကြီးကြီး ဖြစ်နေတာပါ”
ဒီနောက်မှာတော့ အထူးပြုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေစုပြီးတော့ Kent နမူနာတွေရဲ့ ဝိသေသတွေကို လေ့လာကြပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ သူတို့ပြဿနာတစ်ခုနဲ့ ကြုံပါတော့တယ်။ ပြဿနာကတော့ Genome Sequencing အပြည့်အဝ ပြီးသွားတဲ့ နမူနာ အလုံအလောက် ရှိမနေခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့် မထင်မှတ်ထားတဲ့ နေရာကနေပြီးတော့ အကူအညီရခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို လူထောင်နဲ့ချီပြီး စစ်ဆေးပေးနေတဲ့ ဒေသတွင်း “မီးပြတိုက်” ဓာတ်ခွဲခန်းတွေက ဝန်ထမ်းတွေဟာ ပြဿနာတစ်ခု ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ တချို့သော စစ်ဆေးမှုတွေမှာ ရှာတွေ့မယ်လို့ ထင်ထားတဲ့ Gene တစ်ခုကို ရှာမတွေ့ဖြစ်နေကြတာပါ။ ဖြစ်ချင်တော့ ဒီမှာ Gene ပျောက်နေတဲ့အချက်ဟာ မျိုးကွဲအသစ်ရဲ့ ဝိသေသဖြစ်နေတာပါပဲ။
“အစက သူတို့က သူတို့စမ်းသပ်တဲ့ပုံ မှားနေတယ်လို့ ထင်တာ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို မတွေ့တာတွေက ပိုပိုပြီး များလာတာပဲ” လို့ Dr. Chand က ဆိုခဲ့ပါတယ်။
“မီးပြတိုက် စမ်းသပ်ခန်းတွေက ရောဂါမျိုးကွဲကို ရှာတွေ့တာက အများကြီး တာသွားခဲ့ပါတယ်”
အမှန်တကယ်ကတော့ Genome Sequencing ဟာ အချိန်ကြာလို့ ဒီလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲ ဒီမျိုးကွဲက ပိုမြန်မြန် ပျံ့လာလို့ဆိုတာ ပိုသိသာလာပါပြီ။
ဗီဇပြောင်းတာတွေ အားလုံးက အန္တရာယ်ရှိတာလား?
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေးဌာန (CDC) ကတော့ မျိုးဗီဇပြောင်းတယ်ဆိုတာကို အောက်ပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပါတယ်။
“လူများနဲ့ တိရိစ္ဆာန်များကို ကူးစက်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ဗိုင်းရပ်တွေရဲ့ မျိုးဗီဇကုတ်တွေ သဘာဝအတိုင်း အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲခြင်း” လို့ ဆိုပါတယ်။
“ဒီဗိုင်းရပ်မှာ မြင်ရတဲ့ မျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုအများစုဟာ လူတွေ သူတို့ဘဝတလျှောက် ရကြတဲ့ အမာရွတ်တွေနဲ့ တူပါတယ်။ လမ်းတလျှောက်မှာ တွေ့ရတဲ့ အမှတ်တမဲ့ အမှတ်အသားတွေပေါ့။ ပြီးတော့ အများစုမှာက သိသာထင်ရှားတာ၊ အရေးပါတာတွေ ရှိမနေပါဘူး” လို့ John Hopkins တက္ကသိုလ်ဆေးကျောင်း ပါမောက္ခ Stuart Ray က ပြောပါတယ်။
“ဗိုင်းရပ်ရဲ့ ဗီဇပြောင်းလဲမှုတစ်ခုက ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ အမူအကျင့်တွေကို ပြောင်းလဲစေတယ်ဆိုတဲ့ အ‌ထောက်အထား ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပြီဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာစရာ အများကြီး ထပ်ရှိသွားပါပြီ”
ကာကွယ်ဆေးတွေဟာ မျိုးကွဲတွေရန်က ကာကွယ်ပေးနိုင်လား?
“သတင်းကောင်းကတော့ WHO (ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့) က အရေးပေါ်သုံးခွင့်ပေးထားတဲ့ ကာကွယ်ဆေးအားလုံးဟာ Delta မျိုးကွဲကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ပြင်းထန်ရောဂါလက္ခဏာများ၊ ဆေးရုံတက်ရခြင်းနဲ့ အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်” လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ Dr. Soumya Swaminathan က ဇူလိုင် ၁ မှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီ WHO ရဲ့ ရှင်းလင်းချက်ဗွီဒီယိုမှာတော့ Dr. Swaminathan က အောက်ပါအတိုင်း ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားပါတယ်။
“Delta မျိုးကွဲ ဖြစ်တာများတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ လုပ်ထားတဲ့ လေ့လာချက်တွေအရ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသားသူတွေဟာ ဆေးရုံတက်ရခြေ အတော်ကို ပိုနည်းပါတယ်။ Delta မျိုးကွဲရန်ကနေ အလုံးစုံကာကွယ်နိင်ဖို့ဆိုရင်တော့ ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝ ထိုးပြီးဖို့တော့ လိုပါတယ်”
ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါရဲ့ လူထုကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုကို လျှော့ချပြီး ကမ္ဘာတဝန်းက လူသားတွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ် သက်ရောက်မှုနည်းစေဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတော့ စီးပွားရေးနဲ့ အခြားသက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဆိုင်ရာ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကို ညှိနှိုင်းနိုင်ဖို့ Covid Action Platform ကို World Economic Forum က စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
Forum ကနေပြီးတော့ ကိုဗစ်ကြောင့် ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် လက်တွေ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ဆွေးနွေးနိုင်အောင် UPLINK innocation crowdsourcing platform ကိုလည်း အသုံးပြုနေပါပြီ။ အဲဒီမှာ ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေကို စောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့ ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာသုံး App တစ်ခုလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
KNU တပ်မဟာ (၅) နယ်မြေမှာ ၂ ရက်အတွင်း ပစ်ခတ်မှု ၈ ကြိမ်ဖြစ်ပြီး စစ်အုပ်စုဘက်က ၁၁ ဦး သေဆုံးခဲ့